सचिन परियारको घर झगडाको बारेमा यस्तो भन्दै प्रेम परियार धेरैपछि मिडियामा । कहाँ हराएका थिए, प्रेम ? (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
सानै उमेरमा निकै सुमधुर गीतहरु गाएर चर्चामा रहेका गायक प्रेम परियार यतिबेला भने हराए जस्तै भएका छन् । धेरै भयो उनको गीत सुनिएको छैन, आखिर कहाँ के गर्दैछन् त, प्रेम परियार ? शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याईरहँदा प्रेमले आफु नयाँ गीतको तयारीमा रहेको बताए । साथै उनले आफु बिचमा हराउनुको कारण पनि खुलाए । धादिँगको बिपन्न परिवारबाट उठेर नेपाली साँगीतक क्षेत्रमा एक समय भाईरल जस्तै बनेका प्रेमको आवाज बिचमा परिवर्तन भयो । उमेर सँगै परिवर्तन भएको आवाले उनलाई साथ दिएन र गीतहरु गाउने शिलशिलामा पनि कमि आयो । प्रेमको सानोको आवाज धेरैले रुचाउँथे ।
मिडियामा प्रस्तुत भएका प्रेमले आफुलाई सानोमा सेल्फी खिच्न आउने भिडदेखि अहिले बाटोमा हिड्दा कसैले नचिन्ने अनुभव समेत रहेको बताए । साथै प्रेमले पछिल्लो समय आएका साना भाईरल गायकहरुको बारेमा पनि बोले । अशोक दर्जी, सचिन परियार लगायतका गायक भाईहरुको बारेमा बोल्दै प्रेमले यसरी आउनु त रामे हो तर पछिल्लो समय सचनको परिवारमा भईरहेको घटनाले भने आफुलाई दुखी तुल्याएको बताए । के भन्छन् त, प्रेम ? भिडियो हेर्नुस